Baqattoota Oromoo -
Tag Archives: Baqattoota Oromoo
VOA WASHINGTON DC— Baqattoonni Yemen keessa jiraatan gargaarsi namoomaa Tokkummaan motummootaa waadaa seene biyyattii ga’us kanneen Aden keessa jiran hin dhaqqabin jiraachuu ibsaniiru. Lolli yeroof …
Iyyannoo Baqattoota Oromoo Aden/Yemen
Irraa: Baqattoota Oromoo Adan-Yaman. Gara:Qaama Dhimmi kun ilaalu hundaaf: Ebla 19/2015, Dursinee nagaa oromummaa fi obbolummaa keenya isiniif dhaamna.Itti aansinee gara yaada keenyaatti yoo deebinu …
WASHINGTON DC— Baqattoonni Yemen keessa jiran yeroo ammaa rakkoo hamaa keessa jiraachuu isaanii dubbatu. Dhukaasi magaalaa nuti keessa jirru Aden keessatti waan geggeessamaa jirruuf gad …
Sa’uudi Arabiyaa; Ilmaan Oromoo 230 mana hidhaa Najraan keessatti akka itti azzabamaa jiran caqasi ! dhageessee maaltu na dhibe jettee hin rafinii akkamitti akka dirmattuuf …
Cairo, Egypt – For months, Gutama Gallatobati, a proud farmer and mechanic of Oromo descent languished in an Ethiopian prison over accusations he burned an Ethiopian …